I-Apple ityale i-50 yezigidi zeedola kwiQonga leeMvumi ezizimeleyo I-UnitedMasters | Ndisuka mac
Umsasazi womculo ozimeleyo iUnitedMasters ibhengeze umjikelo omtsha wenkxaso mali, Inkxaso mali ejikelezwe yiApple enezigidi ezingama-50 zeedola nalapho ikwafumaneka Ialfabhethi kunye neA16z. Eli qonga lenzelwe ukuba amagcisa agcine ubunini bomsebenzi wabo ngokupheleleyo kwaye ungadluli ezandleni zeenkampani ezirekhodayo, njengoko bekusoloko kunjalo.
Ukongeza, iyabavumela wandise amathuba akho ezoqoqosho ukufikelela kwizigidi zabalandeli abatsha. Eli qonga libonelela iimvumi ukufikelela kulo lonke ulwazi olunxulumene nomxholo abawenzayo, amandla okunxibelelana nabalandeli babo ngokwenza umxholo omtsha, kunye nendlela ethe ngqo yokubonelela amatikiti ekonsathi, ukuthengisa kunye nezinye iinzame zorhwebo.
USteve Toute, i-CEO ye-UnitedMasters ithi:
Sifuna onke amagcisa abe namathuba afanayo. Okwangoku, amagcisa azimeleyo anethuba elincinci lokuphumelela kwaye sizama ukususa ibala.
Onke amagcisa kufuneka abe nokufikelela kwi-CTO. Inxalenye yexabiso lokuba yintoni umphathi namhlanje ngumculi kufuneka adluliselwe kuloo ndima.
Umzekelo wezivumelwano i-UnitedMasters efikelele kuzo ukukhuthaza amagcisa azimeleyo anokufumaneka ngokwahlukileyo izivumelwano ekufikelelwe kuzo kwiminyaka yakutshanje nge-NBA, i-ESPN, iTikTok kunye neTwitch phakathi kwezinye.
Ezi zivumelwano zivumele amagcisa ukuba afikelele kwizivumelwano neenkampani ezinkulu, ngokwesiko, Ngekuthethwe ngazo ziinkampani ezirekhodayo.
Ukulandela isibhengezo, u-Eddy Cue wathi:
USteve Stoute kunye ne-UnitedMasters banika abadali amathuba amaninzi okuqhubela phambili amakhondo omsebenzi kunye nokuzisa umculo wabo kwihlabathi. Igalelo lamagcisa azimeleyo lidlala indima ebalulekileyo ekuqhubeni ukukhula okuqhubekayo kunye nempumelelo kumzi mveliso womculo, kwaye ii-UnitedMasters, ezinje ngeApple, zizinikele ekuxhobiseni abadali.
Kungenzeka ukuba ukusebenza kweli qonga kuvakala ngathi kuninzi kuwe. I-Apple Music Qhagamshela, Inzame ka-Apple yokunxibelelana nabantu kwezobugcisa ezasungulwa ngo-2015 kunye yavala iingcango zayo kwiminyaka emi-3 kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ityale i-50 yezigidi zeedola kwiqonga labaculi abazimeleyo i-UnitedMasters